programmer Archives - Saturngod
To fresh graduate developers
Posted on Updated May 7, 2018 by saturngod
ရန်ကုန်ပြန်ရောက်ပြီး ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းစလုပ်တော့ အဓိက ပြဿနာက အလုပ်မှာ လိုအပ်သည့် နေရာတွေ အတွက် လူခန့် ဖို့ ခက်သည့် ပြဿနာ ကို ကြုံရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ company မှ မဟုတ်ပါဘူး။ ရန်ကုန်က နေရာတိုင်း နီးပါးမှာ လိုချင်သည့် လူ မရဘူး ဆိုတာကို ကြားနေရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ company ကို junior တွေ အလုပ်လျှောက်ကြပါတယ်။ သို့ပေမယ့် အတွေ့အကြုံ လုံးဝ မရှိသေးဘူးသည့် သူတွေကို အချိန်ပေးပြီး မသင်ပေးနိုင်ပါဘူး။ startup တွေ အနေနဲ့ junior developers တွေကို အချိန်ပေးပြီး သင်မပေးနိုင်ကြပါဘူး။ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံဆိုတာကတော့ ဘယ် company မှာ […]
Chapter7Done
Posted on Updated February 4, 2017 by saturngod
ရေးလက်စ စာအုပ် chapter7တော့ ပြီးသွားပြီ။ Chapter7က သိပ်ပြီး ထွေထွေ ထူးထူး မပါတာကြောင့်လည်း ပါတယ်။ အများကြီးရေးပြီး အများကြီး ရှင်းရမယ့် အခန်းကတော့ 8 နှင့်9ပဲ။ အဲဒီ ၂ ခန်းကို တော်တော် အချိန်ယူပြီး ရေးရမယ်။ စကားမစပ် ကျွန်တော် ဒီစာအုပ် ရေးတိုင်း ကိုစိုးမင်းကို သတိရတယ်။ နောက်ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ လက်သုံးစကားပေါ့။ ၁။ သောက်ရေးမပါတာ ဘာမှမလုပ်ဘူး။ ၂။ လောကမှာ သူများလုပ်တာ လိုက်လုပ်တာလောက် သောက်ရှက်မဲ့တာမရှိဘူး။ ၃။ ပုံမှန်အားဖြင့် မည်သည့် ဝေဖန်မှုကိုမျှ အလိုမရှိ / မလိုအပ်ပေ။ ၄။ အချို့အရာများသည် ကျွန်ုပ်၏ […]
Posted on Updated February 25, 2016 February 25, 2016 by saturngod
The pragmatic programmer စာအုပ်ဖတ်ပြီးတော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပြန်မေးမိတဲ့ မေးခွန်းက အခြား တစ်ယောက် က ငါ program ထဲမှာ bugs ရှာတွေ့ ရင် ငါ ရှက်မိသလား ? ရုတ်တရက် ဖြေမိရင်တော့ မရှက်မိဘူး။ Program တိုင်းမှာ bug ရှိတာပဲ။ bug ဖြစ်ရင် ပြန်ပြင်ပေါ့လို့ ပဲ လွယ်လွယ် ဖြေမိမှာပဲ။ The Pragmatic Programmer ဖတ်ပြီးတဲ့ အခါမှာ bug ရှိနိုင်ပေမယ့် လျော့ချနိုင်တယ်။ Testing အပိုင်းမှာ developer တွေ ရဲ့ ပေါ့လျော့တာကြောင့် bug များရခြင်း ဆိုရမယ်။ ဒါဟာ ရှက်စရာ ဆိုတာကို သဘောပေါက်လာတယ်။ ကျွန်တော်တို့ project […]
Posted on Updated April 19, 2016 February 16, 2016 by saturngod
The Pragmatic Programmer ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ် က မှ ဖတ်လို့ ပြီးသွားတယ်။ စာအုပ်ဖတ်နေရင်းနဲ့ ဒီစာအုပ်ကို အလုပ်စလုပ်တဲ့ အချိန်လောက်က ဖတ်ထားမိခဲ့ရင် ကောင်းမှာပဲ ဆိုပြီး တွေးမိတယ်။ စာအုပ်ထဲက အချက် တော်တော်များများကတော့ အလုပ်လုပ်တာ ၈ နှစ် ဝန်းကျင်လောက် ရှိလာတဲ့ အခါ စာအုပ်ထဲက အချက်အလက် တော်တော်များများက အလုပ်ကနေ တဆင့် သင်ပြီးလို့ လက်တွေ့ လုပ်ခဲ့တာတွေ များတယ်။ သို့ပေမယ့် လိုအပ်လို့တာ လုပ်ခဲ့ပေမယ့် ဘယ်လောက် အရေးပါတယ်။ ဘာကြောင့် လုပ်သင့်သလဲ ဆိုတာ ကောင်းကောင်းမသိဘူး။ ဒီစာအုပ်ဖတ်ရင်းနဲ့ မှ အသုံးဝင်ပုံတွေကို သဘောပေါက်လာတယ်။ တစ်အုပ်လုံးကတော့ ဖတ်ရတာ မဆိုးဘူး။ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်နဲ့ […]
Posted on Updated March 26, 2010 March 25, 2010 by saturngod
Developer နဲ့ Programmer တွေ မကွဲကြသေးတဲ့သူတွေအရင်ဆုံး dictionary မှာ အဲဒီ စာလုံး နှစ်လုံးကို ရှာကြည့်သင့်တယ်။ Developer (n) : နယ်မြေကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်သူ(သို့)ကုမ္ပဏီ။ (ဖလင်၊ ဓာတ်ပုံ) ပုံဖော်ဆေး။ Programmer (n) : ကွန်ပျူတာအတွက်ညွှန်ကြားချက်ရေးသားပြုစုသူ။ အဲဒါကတော့ ornagai.com မှာ ရှာထားတဲ့ result တွေပါ။ WordNet မှာ ပြထားတဲ့ result တွေကတော့ developer (someone who develops real estate (especially someone who preparesasite for residential or commercial use)) programmer, computer programmer, […]
Posted on Updated March 15, 2010 by saturngod
တကယ်ကောင်းတဲ့ အဖြေလေးပဲ သဘောကျလို့ ကူးထားလိုက်တာ။ Programming is the act of writing, compiling, testing and debugging source code. Software development includes other activities like: Requirements definition Specification writing Project planning Creating an installation package Troubleshooting problems during installation and, and, and… Thereforeaprogrammer isaperson who produces code, usually after some sort of specification. This […]